Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.3.1.3 Non-reactive
Kuyerwa iri zvikuru kashoma kuchinja maitiro ari makuru mashoko zvinyorwa.
Rimwe dambudziko evanhu tsvakurudzo ndechokuti vanhu vanogona kuchinja maitiro avo kana vachiziva kuti vari chaichengetwa nevatsvakurudzi. Masayendisiti Social kazhinji vanodana unhu ichi semhinduro mutsvakurudzi kuyerwa reactivity (Webb et al. 1966) . Chimwe guru mashoko nevakawanda mutsvakurudzi vanoona vachivimbisa ndechokuti vatori hadzifaniri kuziva kuti mashoko avo vari atora kana ivo vanojaira ichi date muunganidzwa kuti haichawaniki anoshandura maitiro avo. Nekuti ivo vasiri reactive, saka, mabhuku akawanda mashoko makuru zvinogona kushandiswa kudzidza maitiro asina amendable kuti yakarurama kuyerwa kare. Somuenzaniso, Stephens-Davidowitz (2014) rakashandiswa kuwanda musaruraganda mashoko ari kutsvaka injini queries kuyera kwemarudzi animus dzakasiyana kumatunhu kuUnited States. The Non-reactive uye makuru (ona yapfuura chikamu) hunhu kutsvaka Data kwakaita kuyerwa kuti zvaizova zvakaoma kushandisa dzimwe nzira, dzakadai kuongorora.
Non-reactivity Zvisinei, haavimbisi kuti mashoko aya zvimwe wakananga vanoratidza yavanhu maitiro kana mafungiro. Somuenzaniso, sezvo imwe respondent akaudza Newman et al. (2011) , "Hakusi kuti handina matambudziko, Ini hazvisi ngaazviise pamusoro Facebook." Nemamwe mashoko, kunyange zvazvo vamwe guru mashoko zvinyorwa zviri dzisiri reactive, havana vakasununguka evanhu desirability kusasarura nguva dzose , tinowanzoedza vanhu vanoda vachindomira pamberi nepandinogona napo. Uyezve, sezvo ndichange kutsanangura zvakawanda pazasi, izvi Data matsime dzimwe nguva rinoitei nokuda zvinangwa pachikuva varidzi, dambudziko inonzi algorithmic akakunda (zvinorondedzerwa kupfuura pazasi).
Kunyange zvazvo asiri reactivity zvinobatsira pakutsvakurudza, club maitiro evanhu pasina yavo mvumo uye ruzivo panozova nezvokunetseka inokurukurwa pazasi uye zvakadzama muChitsauko 6. A paruzhinji backlash pamusoro yakawedzera digitaalinen zvokuongorora kungaita guru mashoko gadziriro kuwedzera reactive pamusoro nguva, uye simba nezvemhosva digitaalinen zvokuongorora aigona kunyange kutungamirira vamwe vanhu kuedza kuti vasarudze-kubva guru mashoko mugadziriro zvachose, kuwedzera nezvemhosva asiri representativity (zvinorondedzerwa kupfuura pazasi).
Izvi zvivako zvitatu zvakanaka mashoko makuru nokuda evanhu tsvakurudzo-guru, nguva dzose-mberi, uye vasiri reactive-kazhinji simuka nokuti izvi Data manyuko havana zvokuumbwa nevatsvakurudzi yokutsvakurudza. Zvino, Ndichaenda kuenda zvivako nomwe guru mashoko anopa kuti vakaipa pakutsvakurudza. Izvi zvinhu uyewo zvinoodza simuka nokuti mashoko aya haana kusika nevatsvakurudzi yokutsvakurudza.